WAR CUSUB: DF Somaliya oo mar kale amar dul-dhigtay diyaaradaha u duulaya Kismaayo (Maxaa cusub?) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta WAR CUSUB: DF Somaliya oo mar kale amar dul-dhigtay diyaaradaha u duulaya...
Kismaayo (Halqaran.com) – Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa markale amaro dul dhigtay shirkadaha Duulimaayadda ku taga Magaaladda Kismaayo ee Caasimadda KMG ah ee maamulka Jubbaland.
Hey’adda duulista Rayidka Soomaaliyeed SCAA qoraal ayay soo saartay ayaa lagu sheegay in Shirkad kasta oo u duuleysa Kismaayo inay soo weydiisato Xafiiska Hey’adda fasax duulimaad 24 saac ka hor, islamarkana shirkad kasta inay soo dalbato fasaxii ay ugu duuli laheyd Kismaayo, si aan looga joojin duulimaadka xili dambe.
Arintaan u muuqata mid dowladda Dhexe ay kaga hortagayso in Wafuud Caalami ah ay tagto Magaaladda Kismaayo si ay kaga qeyb galaan Caleema saarka Axmed Madoobe.
Si kastaba, dhawaan Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Soomaaliya ayaa soo saartay amar ah in diyaaradaha aadaya Kismaayo iyo kuwa ka imaanaya inay soo maraan magaalada Muqdisho si loo hubiyo.
Amar la dul dhigay
diyaaradaha u duulaya Kismaayo